डेंगु संक्रमित भएमा के गर्ने ? कसरी बच्ने ? जानकारी लिनुहोस – सुदूरखबर डटकम
डेंगु संक्रमित भएमा के गर्ने ? कसरी बच्ने ? जानकारी लिनुहोस
हाल धरानमा देखिएको डेंगु धरानमा मात्र ‘लामखुट्टे खोज र नष्ट’ अभियान केन्द्रित हुँदा विस्तारै अरु ठाउँमा पनि फैलँदै गएको छ र यो जहाँ जहाँ लामखुट्टे छ, त्यहाँ त्यहाँ नपुग्ला भन्न सकिँदैन। यसको लागि स्थानीय सरकारको मात्र सहायताको आश नगरी हामी स्वयंले यसको विरुद्ध अभियानमा अभिनुपर्छ।